Enyanisweni, umntwana oneminyaka emibili ubudala useyindoda encinane kakhulu. Ukuba uhanjelwe ngabahlobo kunye neentsapho, baninzi abazi ukuba benzani nomntwana. Njengomthetho, umdla wabanye abantu uboniswa kubadala abadala, abantwana abakhutheleyo. Kuwe, i-carapace encinci ihlabathi lonke, ubona zonke iinguqu ekuphuhlisweni kwayo. Inyanga yesithathu yokuphuhliswa kwabantwana yinyathelo elilandelayo elibalulekileyo lokufumana ezintsha kunye nempumelelo.
Ziziphi utshintsho ezenzeka kwinyanga yesithathu yentuthuko yabantwana? Ukhulile njani umntwana, wafunda ntoni, uya kufunda ntoni kwinyanga ekhoyo yobomi? Makhe sithethe ngale nto kweli nqaku.
Impumelelo enkulu kunye encinci yomntwana kwinyanga yesithathu yobomi
Njengoko uyazi, iintsana zonyaka wokuqala wobomi zikhula ngokukhawuleza, kwaye ngokukhawuleza zikhula kwiinyanga ezintathu zokuqala zokuphila. Ngaloo ndlela, kwinyanga yesithathu ubunzima bomntwana bunyuse ngokwezi-800 amagremu, ukuphakama ngamangentimitha amathathu, i-head circumference nge-1 cm, kunye nesibindi sesifuba esingaphezu kweyentimitha enye.
Ukuphuhliswa kwezakhono zengqondo
Ekupheleni kwenyanga yesithathu yokuphuhliswa kwayo umntwana sele sele uyazi indlela:
Jikelezela intloko kwisandi esithakazelisayo okanye esitsha;
Uzama ukuhlala phantsi xa bemthabatha ngokubamba;
Uzama ukuphumla kwiingqungquthela zakhe xa elala ngesisu sakhe;
Isundu sentsana sivuliwe, oko kukuthi, asisayinwe kwisandla, njengasezinyangeni ezidlulileyo;
inkunzi inokulandela into ehambayo ehambayo;
umntwana ubonisa umnqweno wokubamba itekisi;
kwiindawo "zokulala ngesisu," umntwana unako ukubamba intloko malunga nemizuzwana eyi-10-15;
Ukuba umntwana ukhuliswe, ngoko unako ukubamba intloko kunye nomso.
Uphuhliso loluntu lomntwana
Ngokubhekiselele kuphuhliso loluntu, umntwana uyakwazi:
bafunde amalungu entsapho zabo;
Ndonwabile ukumomotheka kwiimeko ezimnandi;
ukutsala ingqalelo kumalungu omtshato asekudala;
ukuphendula ngokukhawuleza phambi kobomi beentsapho ezizithandayo - umama nobaba.
Ukuphuhliswa kwamakhono engqondo
Kanye kunye nophuhliso olusebenzayo lwengqondo, amakhono omntwana wengqondo aphuhlisayo. Sekuqaleni kwinyanga yesithathu yobomi umntwana unokukwazi:
bonisa ukubonakaliswa kokuqala kwememori;
ulinde ixesha lokutya;
ukwahlula izandi zengxoxo ezivela kwezinye izandi;
uyeke ukuncelisa isifuba okanye ingono, ukuba uphulaphule into enomdla;
ukuba ufunde ubuso bakho, amehlo kunye nomlomo ngoncedo lwezicwangciso.
Ukuphuhlisa izakhono zamandla
Njengoko uyazi, ukuze umntwana akwazi ukuhlakulela ngokupheleleyo, ukugcina nokufunda ihlabathi jikelele, ukuphuhliswa kwezakhono zeemoto kudlala indima enkulu. Ngomnyaka wokuqala wobomi kukho ukukhula okusebenzayo kwenkqubo ye-musculoskelet of the baby, ngoko ufunda ukuguqula ukusuka kwisisu ukuya ngasemva kwaye ngokulandelanayo, hlala, uvuke, uhambe, kwaye emva koko, ngomnyaka wesibini wobomi, ugijime uze ufike.
Sekuqaleni kwinyanga yesithathu yokuphuhliswa komntwana, umntu unokubona ukuphuhliswa okusebenzayo nokuphucula izakhono zezithuthi. Ukunyakaza kweengxaki zengane kulungelelaniswa ngakumbi, ukunyakaza komlenze kuphuhlise kwaye kuphuculwe. Ngaloo ndlela, umntwana uqinisa inkqubo yakhe ye-muscular yokuphumelela ngakumbi. Musa ukulibala malunga ne-gymnastics kunye nokusila. Khetha kwaye ufezekise ubunzima bokuzivocavoca, umntwana ofanelekileyo ngobudala. Ukukhethwa ngokuchanekileyo kunye nokwenza i-gymnastics kuya kunceda ukuqinisa inkqubo ye-muscular yomntwana, kuya kubangela ukuphuhliswa kwesifuba sakhe, kwaye ngenxa yoko-kuya kukhawuleza inkqubo yokufumana umntwana ngolwazi olutsha.
Sekudlulileyo kule minyaka, kwaye nangaphambi koko, esesesibelethweni, abantwana babonisa umdla kumnxibelelwano. Ewe, inkunzi eneminyaka emibili iyakwazi ukuqonda intsingiselo yentetho yakho, kodwa ifuna kakhulu ukunxibelelana namalungu omndeni omdala, ngokuyinhloko nonina.
Umntwana uya kubonakala ngokubonakalayo. Ngokuqhelekileyo, unokubona ukuba umntwana "uphendula" kuwe kuphela emva kokuphela kwentetho yakho, njengokungathi ukuphulaphule.
Yintoni enokuyenza nomntwana kwinyanga yesithathu yobomi? Okokuqala, ukunxibelelana. Thetha kwintsana malunga nento yonke, thetha ngendlela oyithandayo ngayo, oko ucinga ngako. Ukongezelela, zama ukuxelisa umntwana, ukuthetha izandi ezithethayo umntwana wakho. Kungekudala iya kuba yintetho yencoko phakathi kwakho nomntwana wakho.
Ukuncedisa umntwana ukuba akhule ngokukhawuleza, iingcali zincoma "iiklasi" zilandelayo:
Ukuphuhlisa i-device vestibular. Ukwenza oku, unokugwinxa umntwana kwibhola elikhulu okanye, ukusibamba ezandleni zakhe, uninzi ukukhwela esihlalweni sokugungqa. Ukubeka ngokucophelela umntwana kwisisu sakhe kwibhola, kwaye, ngokubamba ngecala, ngokukhawuleza ugqithisele ibhola phambili, ekhohlo ngakwesobunxele.
Ukuphuhlisa ubuchule obunomntwana kumntwana. Ukwenza oku, vumela imfene ibambe izinto ezenziwe ngezinto ezahlukeneyo. Iingcali zicebisa ukuthenga amathoyizi ayenziwa kuphela ngeteknoloji, kodwa isetyenziselwa ukuzenzela.
Ukuphuhlisa umboniso womntwana kululeka ukubeka phezu kwakhe umtya omnyama kunye nomhlophe omgca, kunye nasemlenzeni - inyawo ezifanayo ezimiselweyo. Kuboniswa ukuba abantwana abancinci bakhuthele ngakumbi ekuhlukaniseni amathoni amnyama kunye amhlophe. Ukuhambisa imilenze kunye nokuphatha, inkunzi iya kubahlola, ukuqeqesha, ngoko, umbono wakhe, kwaye iya kufunda ukudibanisa ukuhamba kwayo.
Hamba ithoyizi phezu kwesikhalazo-isithuthi esijikelezayo. Yonke imihla emithathu, utshintshe amathoyizi ukuxhasa umdla wolutsha ukuba ufunde izinto ezintsha kwaye uvuselele uphando olutsha.
Ngaphezulu kwetafile eguqukayo okanye indawo apho utshintshe iimpahla, xhoma ibhaluni. Uya kwenza umntwana ojikelezayo ukhangele kwaye unomdla.
Emva kokuhlamba, mbuyisela umntwana kwisibuko, kumncumo, uthinte amalungu omzimba wakhe ubize.
Sebenzisa ii-toys ezizwakalayo ukukhuthaza uncedo lwentetho yomntwana. Mfundise ukuba afumane umthombo wesandi. Ukwenza oku, cima isandi ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemida eyahlukileyo: phambili, ngasemva, phezulu, ngaphantsi, kude kwaye kufuphi. Ungayisebenzisi imivalo evelisa izandi ezinamandla. Njengomthetho, ityhupheni yekhwalithi izandile ngokuzithelekileyo, kungeyiyo inomsindo yokuncedisa umntwana. Sebenzisa kwakhona izimbiza zeplastiki ezizaliswe ngeengxolo ezihlukahlukeneyo: i-millet, i-buckwheat, i-peas.
Ngethuba lokubeka umntwana kwiengubo okanye kumatshini okupakisha. Ngoko uya kuvuselela ububele obunomntwana kunye nokubonakala kwakhe.
Ziziphi iimpawu zokuthenga umntwana?
Amathoyizi, amathoyizi, kodwa kuthekani ngaphandle kwabo? Ndihlala ndifuna ukuthenga into entsha, inomdla kwaye iluncedo kumntwana. Kwaye kuya kuba luncedo ntoni kwiinyanga ezimbini zintathu?
Ifowuni iya kunceda ukugxininisa okubonakalayo, kunye nokulandelelana kwamehlo. Kunconywa ukuyisebenzisa ukusuka ekuzalweni.
Iibhaluni ziya kuncedisa ekuphuhlisweni kwezinto ezibonakalayo zomntwana. Ngokubamba le bhola kwindlela yokuphatha abantwana, uya kuba negalelo ekuphuhlisweni kwezinto zokuxinwa kunye nokubonwa komntwana wakho.
Umzobo obonisa ubuso bomntu . Dweba umfanekiso wesimfa ebusweni bomntu uze unamathele kwisibhedlele kumgama we-15-20 cm ukusuka kwamehlo omntwana. Iintsana zobuntwaba bebancinci zibonisa intshisekelo enkulu ekuboniseni umntu, kwanezicwangciso.
Amathoyizi ngokubetha "ukugaya". Ezi zinto zinceda ekuphuhlisweni kwentetho yabantwana. Ekupheleni kwenyanga yesithathu yobomi, xhoma amathoyizi anjalo phezu kwesibhedlele somntwana ngendlela enokuthi ufikelele kuyo abantwana kunye nemilenze. Emva kwesikhashana umntwana uya kuqonda ukuba, ukuthintela amathoyizi eneemilenze kunye nokuphatha, uyabangalisa.
Amathoyizi ezenziwe ngezinto eziluhlaza. Izinto ezinjalo zinegalelo ekuphuhliseni ububele obuncwane bomntwana. Ivakalelo lokuthintela izinto ezilula zinika ulwazi malunga nokuhlukahluka kwehlabathi elijikelezile.
I bell. Ukudlala nomntwana, ungasebenzisa intsimbi. Jolisa ngokukhawuleza kumgama we-30 cm ukusuka kumntwana, uze uthuthe intsimbi kwenye icala lomntwana. Ukuvakala kwengxolo yebell kuya kuncedisa ekuphuhlisweni kwamandla okuva umntwana.
Iindandatho zokhuni. Iimveliso ezinjalo zikhuthaza ukuphuhliswa kokuhamba komntwana. Namathisela amathoyizi phezu kwesikhalazo kumntwana ongezantsi. Ngokuncedwa kwamacandle anjalo, i-crumb ifunda ukuhambisa isundu esivumelekileyo kwisandla.
Njengoko sibona, kwinyanga yesithathu yobomi bakhe umntwana ukhula kakhulu, utshintsho kwaye ufezekise kakhulu. Ukunyamekela nothando lwabazali alushiyi ngaphandle kokulandelelana, bancedisa umntwana ukuba akhuphe kwindawo evuya kunye nolonwabileyo. Ngaba oku akuyona into ephambili?
Isaladi yeklabishi ngesrayi kunye nembewu
Yintoni eyingozi kakhulu ekutya okukhawulezayo?
Ubudlelwane phakathi koobawo nabantwana
U-Olga Buzova waphoswa ngokugxekwa kwengubo emfutshane
Ukuzivocavoca, ukuqeqeshwa kwabasetyhini abakhulelweyo